Vao 7 Taona, Namoaka ny Bokiny Voalohany Ilay Ankizivavy Afrikana Tatsimo Michelle Nkamankeng · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2016 2:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, bahasa Indonesia, Ελληνικά, Français
Michelle eo amin'ny mikrô ao amin'ny trano fandraisam-peon'ny onjampeo Powerfl987. Sary avy amin'i @Powerfm987 tao amin'ny Twitter
Hatramin'ny fiandohan'ny volana oktobra, ilay tovovavy kely Afrikana Tatsimo Michelle Nkamankeng, vao 7 taona monja, dia niteraka tabataba tamin'ny mpampiasa aterineto. Vao avy namoaka ny bokin-tantarany voalohany ity zazavavy kely ity ary mbola manana maro hafa ao anatin'ny fandaharam-potoanany.
Ao amin'ny tranonkala ecceafrica.com, izay te-hanome fijery miabo ho an'i Afrika, Servan Ahougnon manoratra hoe:
Mihoatra lavitra noho izay azo andrasana amin'ny boky soratan'ny ankizy 7 taona, ny “Miandry onja” dia milaza ny tantaran'ny ankizivavikely iray miala sasatra miaraka ami'ny ray aman-dreniny any amoron-dranomasina. Ity farany dia tsy maintsy hiatrika, miaraka amin'ny fanampian'ireo akaiky azy, ny tahotra iray izay tsy maintsy atrehany manditra ny fialantsasatra manontolo: ny onja. Ity tantara ity raha ny marina, dia boky voalohany amin'ireo andiany telo, izay hivoaka amin'ny taona hoavy ny andiany manaraka.
Tohanan'ny ray amandreniny tanteraka i Michelle Nkamankeng, indrindra moa fa ny reniny, izay nanorina ny trano famoahamboky LANSM Publishing amin'izay tafavoaka ny bokin-janany. Tsy maintsy lazaina fa mahavita mampita mora foana ny fitiavany amin'ireo manodidina azy ilay zazavavy mpanoratra tanora indrindra aty Afrika. .
« Zazavavy kely feno fanetrentena manoratra boky aho. Matoky ny tenako aho, ary manainga ireo ankizikely hanohy ny nofinofiny », hoy ny fanambarany raha nanontaniana izay heviny momba ny tenany izy.
Manoratra mikasika ity tranga tsy mahazatra ity koa ny tranonkala farabaleweekly.com. Io tranonkala io dia miseho ho toy ny sehatra fampitambàrana, izay mampivondrona ireo fironana farany amin'ny zavakanto, ny kolontsaina, ny lamaody, ny mozika ary ny sarimihetsika. Manao fanamarihana ny mpanoratra GOKE ALABI :
Amin'ny taona izay ny ankamaroan'ny ankizivavy dia sahirana milalao amin'ny kilalaony na mijery sarimiaina, Michelle Nkamankeng, 7 taona dia tafiditra amin'ny lohalisitry ny mpanoratra 10 tanora indrindra maneran-tany..
Lasa mpanoratra tanora indrindra aty Afrika ilay zazavavikely Afrikana Tatsimo taorian'ny namoahany ny bokiny «Waiting for Waves», na “Miandry onja”. Tao amin'ny fanadihadiana niarahana tamin'ny BBC Afrika, nolazain'i Michelle tamin'ny mpanadina azy izay nanainga azy hanoratra ny boky. .
Mampahatsiahy fohifohy ny vontoatin'ny boky ny tranonkala negrnews.fr ary mitatitra ny tenin'ny rain'i Michelle :
Ny bokiny izay nosoratany tamin'izy 6 taona dia milaza ny tantaran'ny zazavavikely iray antsoina hoe Titi sy ny fianakaviany izay mipetraka lavitry ny moron-dranomasina. Indray andro, nandeha teny amoron-dranomasina izy ireo, fa natahotra ny onja ilay zazavavikely Titi ary nanampy azy hihoatra ny tahony ny fianakaviany. Taorian'ny nandehanany teny amoron-dranomasina niaraka tamin'ny fianakaviany no nahatonga ny aingam-panahiny hanoratra ny boky..
Mitantara ny rain'i Michelle, Paul Nkamankeng fa tsy fantany hoe manoratra boky ny zanany vavy raha tsy efa vita ilay izy.
« Ny hany zavatra iray voamarikay fony izy efatra na dimy taona, dia tia mamaky boky Michelle. Tiany handeha any amin'ny trano fivarotamboky foana izahay mba hividy boky ho an'ny ankizy ary vitany ny mamaky ireny ao anatin'ny herinandro. Nony feno 5 taona izy, nentinay voalohany teny amoron-dranomasina ary nanontany ahy ny antony ijeren'ny olona ny ranomasina, ary namaly azy aho fa miandry ny onja izy ireo » hoy Paul manazava.
Ny boky “miandry onja’ dia fizarana voalohany amin'ireo andiany efatra.
Ankoatry ny fanoratana, tia manao dihy, lomano ary fanatanjahantena koa i Michelle Nkamankeng.
Ity tanora mpanoratra ity dia efa manana pejy Facebook sy Twitter izay tantanan'ny reniny. Nahatonga azy ho olo-malaza asain'ireo onjampeo, fahitalavitra, sekoly, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny UNICEF, onjam-peo sy fahitalavitra toy ny:Insta: Craze.tv, Radio2000, POWER98.7, sns ny fivoahan'ny bokiny. Na dia BBC izay malaza aza tsy nanatohitra ny faniriana hanadihady an'i Mi chelle Nkamankeng::
@mchelle_n23 Salama, Mpanao gazety ato amin'ny BBC Wolrtd Service aho. Mba tianay ny hiresaka amin'i Michelle ao anaty fandaharan'ny radio, ny Newsday. Maggie.jonas@bbc.co.uk
Ao amin'ny tranonkala konbini.com, milaza ny ezaky ny renin'i Michelle sy ny fanantenan'ilay mpanoratra kely i Daniel Orubo:
Ao amin'ny kaonty Twitter, izay tantanan'ny reniny, manoratra i Michelle: “Ny nofiko dia ny hanainga ireo ankizikely hahatoky ny tenany. Sambatra aho ary tena faly amin'ny tenako. Tia mamaky boky aho hatramin'ny faha-efatry ny taonako. Tia manoratra aho mandritra ny fotoanako malalaka.” Voatery nianatra ny zavatra rehetra ny renin'i Michelle mba hahafahany mamoaka ny bokin'ny zanany. Vitany mihitsy aza ny namorona trano famoahamboky ho azy. Raha nanontanian'ny tranonkalan'ny faritanin'i Gauteng, niresaka ny fanantenany hoan'ny bokiny sy ny hoaviny i Michelle: ” antenaiko ny hahazo vola betsaka amin'ny boky voalohany mba hahafahana mamoaka ireo andininy telo hafa.” Afaka jifaina ao amin'ny Amazon nanomboka ny 11 Oktobra ny boky.
Tamin'ny 7 novambra, ampahafantariny ao amin'ny pejy Facebook fa vahiny manokan'ny SA Literary Awards 2016 (SALA) i Michelle::
7 novambra, 17:45 ·
Amin'izao fotoana izao i Michelle dia eny an-dalany ho any Pretoria ho toy ny vahiny nasaina manokana amin'ny SA Literar Awards (SALA) faha-11 tanterahina izao hariva izao!
i Michelle. no fanamafisana ilay fehezanteny malaza napetrak'i Pierre Corneille tao am-bavan'i Rodrigue, maherifony ao amin'ny tantara an-tsehatrany “le Cid”